Amerika - BBC Somali
Trump oo lagu xirtay xujo canshuur celin
Ninka taajirka ah ee Mareykanka u dhashay ee ganacsada ah, Warren Buffett, ayaa waxa uu ku xujeystay musharraxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump inuu shaaciyo canshuur celinta uu sameeyay.
2 Agoosto 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Trump oo lagu xirtay xujo canshuur celin
Gobolka Florida oo Zika uu ku faafayo Saraakiisha dhanka caafimaadka ee dalka Mareykanka waxay laba jibaareen digniinaha ay ka bixinayaan halista ay dumarka uurka leh ugu jiraan xanuunka Zika oo ka dillaacay magaalada Miami ee gobolka Florida.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Gobolka Florida oo Zika uu ku faafayo Maraykanka oo duqaymo ka gaystay Liibiya
Rasaasayn ka dhacday Maraykanka
Hal qof ayaa ku dhintay afar kale ayaana isbitaal la dhigay kaddib markii ay rasaas ka dhacday labo goobood oo kala duwan oo ku yaalla magaadala Austin, sida ay booliisku sheegeen.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Rasaasayn ka dhacday Maraykanka
Ol'olaha Hillary oo loo "dhacay"
Ol’olaha doorashada madaxwayne nimada ee Hillary Clinton ayaa loo dhacay taas oo qayb ka ah weerar wayn oo dhanka internetka ah oo lagu hayo waaxyaha kala duwan ee xisbiga dimuqraadiga ah, sida ay ku warantay warbaahinta Maraykanku.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Ol'olaha Hillary oo loo "dhacay"
Erdogan oo sarkaal Amerikan ah eedeeyay
Madaxweyne Erdogan ka dalka Turkiga ayaa sarkaal sare oo ka mid ah militariga Mareykanka ku eedeeyay inuu la jiro dadkii isku deyay inay dowladda afgembiyaan, laba isbuuc ka hor.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Erdogan oo sarkaal Amerikan ah eedeeyay
Kineecada Cudurka Zika sida oo gaartay US
Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa ugu baaqaya dumarka uurka leh inay joojiyaan safarada aan muhiimka ahayn ee ay ku tagayaan gobolka Florida ee dalka Mareykanka.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Kineecada Cudurka Zika sida oo gaartay US
Hillary Clinton "wakhtigii qiimaynta" ayaan ku jirnaa
Hillary Clinton ayaa cod bixiyeyaasha u sheegtay in wakhtiga doorashadu ay tahay “wakhtigii qiimaynta” iyada oo taariikh xariiqday markii ay aqbashay in ay noqoto magacaabidda xisbiga 29 Luulyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Hillary Clinton "wakhtigii qiimaynta" ayaan ku jirnaa
Mrs Clintion oo heshay taageerada Sanders
Bernie Sanders ayaa sheegay in Mrs Clinton ay qasab tahay in ay noqoto madaxweynaha xiga ee Mareykanka, halka Michelle Obama ay ku baaqday in loo codeeyo Clinton.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Mrs Clintion oo heshay taageerada Sanders
Florida oo dad lagu dilay kuwana lagu dhaawacay
Booliiska dalka Maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan labo ruux lagu dilay, dad badan oo kalana lagu dhaawacay toogasho ka dhacday baar ku yaalla Florida.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Florida oo dad lagu dilay kuwana lagu dhaawacay